Enye intatheli ethile yake yathi ukuthi noma iteyipu akufanele bavunyelwe ukubheka izilaleli ngaphansi kweminyaka eyi-18, uma uyazigqaja poster uyamamatheka Vudi Harrelson. Umlingisi Filmography, okuhlanganisa eziningi imidwebo, okuhambisana ngokugcwele umfanekiso Hollywood "omubi". Yini ifilimu amaphrojekthi kanye iqhaza lakhe nibaluleke ngokuvakashela?
Umlingisi Vudi Harrelson: inothi oluchaza
Lapho kwazalelwa khona inkanyezi movie esizayo ngo-1961 baba idolobha elincane elise-US isimo Texas. umlingisi wakhula kuyinto ezivamile neze, unikezwa ukuthi iyindodana umbulali, owayebizwa odilikajele ukuhlala ejele. Esikhathini Umlando udumo ubaba waze wavuma ukuthi inqwaba lamakhulu ngokubulala esikwenzile, wathi ngisho mayelana nokuhileleka yakhe ukufa Kennedy.
Umlingisi Vudi Harrelson njengoba umbulali livela kuphela esikrinini esikhulu. Lapho amakhamera zivaliwe, iba iPacific ngani uvikela amalungelo ezintandane izilwane, ukhuthaza umphakathi ukulahla inyama, zivikela ngokunciphisa amahlathi. Union Vudi Harrelson nomkakhe Lauroy Loui Okwabe kungumholo namadodakazi amathathu, elingafunwa bathi wayeyingane efana nezinye uyise okuyisibonelo. Ukuthi umshado, elaba umlingisi yesibili, emvimba sizakhele, bathande induduzo ekhaya.
Iqhaza lokuqala Vudi Harrelsona
indlela umlingisi sika ku-movie enhle kwenzakala isikhathi eside kakhulu. Talent kuhlangene ukubukeka yasekuqaleni - izizathu indima ochungechungeni ithelevishini "Sawubona" ngiyitholile kodwa-engaziwa Vudi Harrelson. izinkanyezi Filmography kuhlanganisa zonyaka eziyisishiyagalombili yephrojekthi ye-TV, kodwa uyaqhubeka dream of a sina oyibamba umsebenzi.
nezinto eziningi ezivivinya okwaholela isimemo we nsizwa ekulesi adubule ahlekisayo "amakati Wild". Kulesi ifilimu, uye wasebenza ngokuhlanganyela ethandwa ngalezo zinsuku, actress Goldi gaiteros.
Okuningi abavelele wazibonakalisa iqhaza okwalandela ku bok ifilimu iphrojekthi "Doc Hollywood", lapho uzakwabo yena Bridget Fonda. Uzungu kugxile onekhono plastic surgery, ngubani waphoqeleka ukuba ahlale izinsuku ezimbalwa, owelapha ukusebenza esibhedlela yesifundazwe.
Imisebenzi, umbukiso, ucwaningo kuqala cinema - elide empumelelweni kwaba Vudi Harrelson. umlingisi Filmography ekugcineni agcwaliswa nge umdwebo lokho kwamlethela ukuba umphakathi. Indima izinkanyezi esizayo "Isiphakamiso bangaphambilini" waba omubi etholwe baxgeki kodwa abathandwa izilaleli.
Drama unbanal icebo ezikhangayo maphakathi okuyinto umbhangqwana oshadile, ahlangabezana nobunzima zezimali. Vudi Harrelson indima esikhathini esizayo ukhetha engavamile, kodwa lokhu kwenzakala engavamile kakhulu. Unkosikazi hero livela fan, ukunikezela imnike isizumbulu semali ukuze banikezwe usuku romantic. uhlamvu bok sika baphoqelelwa ukuba bamukele, njengoba ekhaya-dollar ayizigidi ezingu-kuyadingeka kakhulu.
Bhá ingxenye Vudi Harrelsona
Ngakusasa ifilimu a baxgeki ngazwi linye neyaziwayo esiyingqopha-mlando ekuphileni umlingisi. play wakhe bakhangwa Olivera Stouna, osimema usaziwayo uqala iqhaza ifilimu "Yemvelo Born Killers". Phuma ubugebengu Thriller emvumela ukuba ngokoqobo uvuke abadumile - zonke isibukeli American ungakwazi yini ukuphendula umbuzo ngubani Vudi Harrelson. Filmography kusukela nacetshiswa nge eziningi bands ezithakazelisayo, kodwa indaba we Mickey and Melora lalilokhu esimnandi kakhulu kubo.
Killer othandweni nomunye, iya uhambo ndawonye, kumphuce ekuphileni komuntu ngamunye nazo. Bazitshela ngokwabo yizigebengu edume Bonnie futhi Clyde. Izinswelaboya wafaka ejele, kodwa umbhangqwana uphatha aphinde athole inkululeko, ngenkathi siqhuba Ukugibela wezimpi ezalandela.
"U-Oscar" - umklomelo ukuthi ongakabi wakwazi ukunqoba Vudi Harrelson. Umlingisi Filmography kuhlanganisa izithombe ezimbili abaphakanyiselwe umklomelo ohahelwayo kwazo zonke izinkanyezi movie. Omunye wabo kwakungu-ifilimu "Abantu vs. Larri Flinta", eyakhululwa ngo-1996. Uhlamvu Woody - umshicileli, wahlanganyela ukukhiqizwa bafuna kakhulu emva kumagazini i-US omdala. Le filimu ekutshela ngokuphila umuntu wangempela, nabo Harrelson wachitha isikhathi esithile uzama ukuqonda futhi sibudlulisele ubunjalo iqhawe lakhe.
Tape wesibili, i-indondo ye- "Oscar", kwenzeka kamuva kakhulu - ngo-2009. Sikhuluma isithunywa, lapho umlingisi Kwadingeka ngijwayele ukuba umfanekiso iyunithi likakaputeni obhekene ekwazisa imindeni amasosha oshonile. Duty eyinhloko iqhawe - ukubonakaliswa amazwi enduduzo egameni wamabutho.
Comedy ne bok Harrelson
ababukeli abaningi, hhayi umlingisi owathanda ngaphambilini bashintshe imiqondo yabo 2009 lapho kukhululwa the comedy "Zombieland." Thriller ezihlekisayo isitshela indaba apocalypse, kwenzekani e-United States ngokuqondene ayehlasela efile ophilayo. Wasinda iqembu elincane labantu, okuyinto amasondo isimo, uhlangabezana izibhelu sesikhathi Zombies. Ekugcineni wathola endaweni ephephile - kuba kunepaki.
"Zombieland" - omunye izindaba ezihlekisayo kakhulu, okuyinto nengxenye ukuthwetshulwa Vudi Harrelson. Amafilimu naye ngokuvamile eyakhelwe black amahlaya, kodwa horror-comedy kwaba olungcono kakhulu kule ndaba. Uhlamvu umlingisi - umzingeli zinesibindi, ukubhubhisa undead. Harrelson wabonga abadali isithombe ngoba ithuba lokunikeza amademoni yabo kwangaphakathi futhi abe nesikhathi omkhulu phezu isethi. Eba indima zakwehlula ephelele.
"Psychopaths Seven" - omunye brilliant comedy indaba wawusetshenziswa Vudi Harrelson. Amafilimu ngomuzwa lwaseBrithani amahlaya akuvamile ahlale ngaphandle amehlo omphakathi, begodu kwenzekeni leyoteyipu, ositshela ngokuphila ebukekayo crazy. Star got indima Charlie gangster - normal ngomuzwa.
Fans of the umlingisi akufanele ukulahla movie "Factory." Vudi Harrelson kudlalwa uhlamvu emangalisayo ongenazo imikhuba emibi, qakala wobulili obuhlukile, asifuni ukusebenza. Konke kushintsha lapho umkhaya nendoda ongaziwa sika uqale ukuthatha izwe. Hero Kuyaphuthuma dollar ayinkulungwane 500, okuyiwona uyahamba ubuqhawe e-bowling. Wabuye ngempoqo ukuze uvumelane inkampani umuntu osolisayo.
amafilimu nje kuphela kodwa futhi uchungechunge TV, okuyinto ethatha abanamakhono umlingisi iqhaza, okufanelekelayo ukuba isibukeli isithakazelo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene TV iphrojekthi "kusho uDetective Weqiniso". Vudi Harrelson ukuzama umfanekiso umphenyi ngubani uphoqelekile ukuba ukufuna umlingani umlobi kubulawa ngonya kwabazali bami, lonke uchungechunge ezenzeka e-US saseLouisiana.
Ukuze kumdlali, leso sithombe Kwaba yithuba eliyingqayizivele ukubuyela indima sina, badedisele izindima amahlaya. Kuyinto ephawulekayo ukuthi kuhlelwe zonyaka omusha ezithakazelisayo yochungechunge.
Kubonakala sengathi i-main isithombe ekhona Filmography Harrelson.